1-3. Ka Daniel dae ne anisoadehu ahorow a onyae wɔ Belsasar ahenni afe a edi kan no mu ho asɛm.
DANIEL nkɔmhyɛ a ɛkanyan adwene no de yɛn san yɛn akyi kɔ Babilon hene Belsasar afe a edi kan no mu. Na Daniel atra nnommumfa mu akyɛ wɔ Babilon, nanso wanhinhim da wɔ ne mudi a okura ma Yehowa no mu. Bere a odiyifo nokwafo a seesei wadi mfe 70 ne akyi “da ne mpa so no, ɔsoo dae huu anisoade bi.” Na hwɛ sɛnea saa anisoadehu ahorow no ma osuroe!—Daniel 7:1, 15.
2 Daniel teɛm sɛ: “Na hwɛ, ɔsoro mframa anan tu bɔe ɛpo kɛse no so. Na mmoa akɛse anan pue fii ɛpo no mu, na ɛsono oyi, na ɛsono oyi.” Mmoa a wɔn ho yɛ nwonwa bɛn ara ni! Nea odi kan no yɛ gyata a ɔwɔ ntaban, nea ɔto so abien no te sɛ osisi. Afei ohu ɔsebɔ a ɔwɔ ntaban anan ne ti anan! Aboa a ɔto so anan a ne ho yɛ den boro so no wɔ dade se akɛseakɛse ne mmɛn du. Na “abɛn” ketewa bi a “aniwa a ɛte sɛ onipa aniwa” wowɔ ho ne “ano a ɛkeka nsɛnkɛse” pue wɔ ne mmɛn du no ntam.—Daniel 7:2-8.
3 Afei Daniel anisoadehu ahorow no dan adwene kɔ nea ɛkɔ so wɔ soro so. Obi a Ne Nna Akyɛ te ahengua so wɔ anuonyam mu sɛ Ɔtemmufo wɔ ɔsoro Asɛnnibea. “Mpem mpem som no, na ɔpedu huhaa gyina n’anim.” Bere a ɔrebu mmoa no ntɛn no, ogye tumidi fi wɔn nsam na ɔsɛe aboa a ɔto so anan no. Ɔde ahenni a ebedi “aman, nkurɔfo ne ɔkasa horow nyinaa” so a ɛbɛtra hɔ daa no ma “obi a ɔte sɛ onipa ba.”—Daniel 7:9-14.
4. (a) Daniel kɔhwehwɛɛ nokwasɛm ahorow fii hena nkyɛn? (b) Dɛn nti na nea Daniel hui na ɔtee saa anadwo no ho hia yɛn?
4 Daniel ka sɛ: “Me honhom fontan me, me honam mu, na anisoadehu no haw me.” Enti obisa “eyi nyinaa ase” fi ɔbɔfo bi hɔ. Nokwarem no, ɔbɔfo no ma ohu “nneɛma no nkyerɛase.” (Daniel 7:15-28) Ɛsɛ sɛ yesusuw nea Daniel hui na ɔtee saa anadwo no ho yiye, efisɛ ɛkaa nsɛm a ebesisi wɔ wiase mu de abedu yɛn bere yi so, bere a wɔde ahenni a ebedi “aman, nkurɔfo ne ɔkasa horow” so ma “obi a ɔte sɛ onipa ba” no ho asɛm. Yɛn nso yɛnam Onyankopɔn Asɛm ne ne honhom mmoa so betumi ate nea anisoadehu ahorow a ɛyɛ nkɔmhyɛ yi kyerɛ no ase. *
MMOA ANAN PUE FI PO MU
5. Ɛpo a mframa bɔɔ no no yɛ dɛn ho sɛnkyerɛnne?
5 Daniel kae sɛ: “Mmoa akɛse anan pue fii ɛpo no mu.” (Daniel 7:3) Ɛpo a mframa bɔɔ no no yɛ dɛn ho mfonini? Mfe pii akyi no, ɔsomafo Yohane huu aboa bi a ɔwɔ ti ason sɛ ɔrepue afi “po” mu. Na saa po no gyina hɔ ma “nkurow ne nkurɔfo akuwakuw ne aman ne ɔkasa horow”—nnipadɔm a wɔatwe wɔn ho afi Onyankopɔn ho no. Enti, po yɛ nnipa a wɔatwe wɔn ho afi Onyankopɔn ho no ho sɛnkyerɛnne a ɛfata.—Adiyisɛm 13:1, 2; 17:15; Yesaia 57:20.
6. Mmoa anan no yɛ dɛn ho mfonini?
6 Onyankopɔn bɔfo no kae sɛ: “Mmoa akɛse yi a wosi anan yi yɛ ahene baanan a wobefi asase so asɔre agyina.” (Daniel 7:17) Ɔbɔfo no kyerɛɛ pefee sɛ mmoa anan a Daniel huu wɔn no yɛ “ahene baanan.” Enti mmoa yi gyina hɔ ma wiase tumi ahorow. Nanso emu nea ɛwɔ he?
7. (a) Dɛn na Bible mu nkyerɛkyerɛmufo bi ka wɔ Daniel dae ne anisoadehu a ɛfa mmoa anan ho ne Ɔhene Nebukadnesar dae a ɛfa ohoni kɛse bi ho no ho? (b) Ohoni no afã horow anan a ɛyɛ fagude no mu biara gyina hɔ ma dɛn?
7 Bible nkyerɛkyerɛmufo taa de Daniel dae ne anisoadehu a ɛfa mmoa anan ho no toto Nebukadnesar dae a ɛfa dua kɛse bi ho no ho. Sɛ nhwɛso no, The Expositor’s Bible Commentary ka sɛ: “[Daniel] ti 7 ne ti 2 di nsɛ.” The Wycliffe Bible Commentary ka sɛ: “Wogye tom sɛ Amanaman mufo ahenni a ɛbaa nnidiso nnidiso . . . no ara na wɔka ho asɛm [wɔ Daniel ti 7] ne [Daniel] ti 2 no.” Wiase tumi anan a Nebukadnesar dae no mu fagude anan no gyina hɔ ma no ne Babilon Ahemman (ne ti a ɛyɛ sika), Medo-Persia (ne koko ne n’abasa a ɛyɛ dwetɛ), Hela (ne yafunu ne n’asen a ɛyɛ kɔbere), ne Roma Ahemman (n’anan a ɛyɛ dade). * (Daniel 2:32, 33) Ma yɛnhwɛ sɛnea ahenni yi ne mmoa akɛse anan a Daniel hui no di nsɛ.
NE HO YƐ HU SƐ GYATA, NE HO YƐ HARE SƐ ƆKƆRE
8. (a) Dɛn na Daniel kae wɔ aboa a odi kan no ho? (b) Aboa a odi kan no gyina hɔ ma ahemman bɛn, na ɔkwan bɛn so na ɛyɛɛ n’ade sɛ gyata?
8 Hwɛ sɛnea mmoa a Daniel huu wɔn no ho yɛ nwonwa! Ɔreka obiako ho asɛm no, ɔkae sɛ: “Nea odi kan no te sɛ gyata, na ɔwɔ ɔkɔre ntaban; mehwɛe ara kosii sɛ wotutuu ne ntaban no, na wɔmaa no so fii fam, na wɔmaa ogyinaa anan abien so sɛ onipa, na wɔmaa no onipa koma.” (Daniel 7:4) Na saa aboa yi yɛ ahenni koro no ara a ohoni kɛse no ti a ɛyɛ sika kɔkɔɔ a ɛne Babilon Wiase Tumi (607-539 A.Y.B.) no gyina hɔ ma no no ho mfonini. Te sɛ “gyata” a ɔkyere mmoa afoforo no, Babilon de atirimɔden sɛee aman ahorow a Onyankopɔn nkurɔfo ka ho. (Yeremia 4:5-7; 50:17) “Gyata” yi de ahoɔhare a ɛte sɛ nea ɔde ɔkɔre ntaban na etui dii ɔko mu nkonim.—Kwadwom 4:19; Habakuk 1:6-8.
9. Nneɛma bɛn na ɛsakrae wɔ aboa a ɔte sɛ gyata no ho, na eyinom kaa no wɔ ɔkwan bɛn so?
9 Bere bi akyi no, “wotutuu” gyata nwonwaso no ntaban no. Ɛrekɔ Ɔhene Belsasar ahenni awiei no, ahoɔhare a na Babilon de di nkonim ne tumi a ɛte sɛ gyata de a na odi wɔ aman so no ano dwoe. Na ne ho nyɛ hare nsen onipa a ɔwɔ anan abien. Esiane sɛ enyaa “onipa koma” nti, ɛbɛyɛɛ mmerɛw. Esiane sɛ na Babilon nni “gyata koma” nti, antumi anyɛ n’ade te sɛ ɔhene wɔ “kwae mu mmoa mu.” (Fa toto 2 Samuel 17:10; Mika 5:8 ho.) Aboa kɛse foforo dii no so nkonim.
ODIDI PII SƐ SISI
10. Na “osisi” no yɛ ahene a wɔbaa nnidiso nnidiso bɛn ho sɛnkyerɛnne?
10 Daniel kae sɛ: “Na hwɛ, aboa foforo a otia abien te sɛ osisi na ogyina hɔ tɔ kɔ ɔfã biako so, na mparow abiɛsa hyɛ n’anom ne sẽ ntam, na wɔka kyerɛɛ no sɛ: Sɔre di nam bebree!” (Daniel 7:5) Ɔhene a “osisi” yɛ ne ho mfonini no ara ne nea ohoni kɛse no koko ne n’abasa a ɛyɛ dwetɛ gyina hɔ ma no—Medo-Persia ahene a wɔbaa nnidiso nnidiso (539-331 A.Y.B.) a Mediani Dario ne Kores Ɔkɛseɛ no na wodi kan na Dario III na otwa to—no.
11. Dɛn na ma a wɔmaa sɛnkyerɛnne kwan so osisi no gyinaa ne fã biako ne mfe mparow abiɛsa a na ɛwɔ ne se ntam no kyerɛ?
11 “Wɔmaa” sɛnkyerɛnne kwan so sisi no ‘so gyinaa ne fã biako so,’ sɛnea ɛbɛyɛ a ebia ɛbɛma wayɛ krado atow ahyɛ aman so adi so nkonim na ɔnam saayɛ so akura wiase tumi no mu. Anaasɛ ɛbɛyɛ sɛ na wɔde gyinabea yi kyerɛ sɛ Persia ahene a wɔbaa nnidiso nnidiso no bedi Mediafo hene Dario a ɔyɛ obiakofo no so. Mfe mparow abiɛsa a ɛhyɛ osisi no se ntam no betumi akyerɛ mmeae abiɛsa a odii nkonim kodui no. Medo-Persia “osisi” no kɔɔ kusuu fam kɔko faa Babilon wɔ 539 A.Y.B. mu. Afei ɛkɔɔ atɔe fam kɔfaa Asia Kumaa kɔɔ Thrace. Awiei koraa no, “osisi” no kɔɔ kesee fam kodii Misraim so. Esiane sɛ ɛtɔ mmere bi a wɔde akontaabude abiɛsa kyerɛ sɛnea biribi mu yɛ den fa nti, ɛbɛyɛ sɛ mfe mparow abiɛsa no nso si so dua sɛ na sɛnkyerɛnne kwan so osisi no ani bere sɛ ɔbɛko afa nsase.
12. Dɛn na efii ahyɛde a ese: “Sɔre di nam bebree” a sɛnkyerɛnne kwan so osisi no dii so no mu bae?
12 “Osisi” no tow hyɛɛ aman so de dii asɛm yi ho dwuma: “Sɔre di nam bebree!” Esiane sɛ Medo-Persia dii Babilon so nkonim sɛnea Onyankopɔn apɛde kyerɛ nti, na ebetumi ayɛ adwuma bi a mfaso wɔ so ama Yehowa nkurɔfo. Na ɛyɛɛ saa! (Hwɛ “Ɔhempɔn a Ɔwɔ Boasetɔ” a ɛwɔ kratafa 149 no.) Ɛdenam Kores Ɔkɛseɛ, Dario I (Dario Ɔkɛseɛ), ne Artasasta I so no, Medo- Persia gyaee Yudafo nnommum a na wɔwɔ Babilon no boaa wɔn ma wɔsan kosii Yehowa asɔrefie na wosiesiee Yerusalem afasu. Awiei koraa no, Medo-Persia bedii amantam 127 so, na na Ɔhemmaa Ester kunu Ahasweros (Xerxes I) ‘di hene fi India kosi Etiopia.’ (Ester 1:1) Nanso, na aboa foforo bɛba.
NE HO YƐ HARE SƐ ƆSEBƆ A ƆWƆ NTABAN!
13. (a) Na aboa a ɔto so abiɛsa no yɛ dɛn ho sɛnkyerɛnne? (b) Dɛn na yebetumi aka wɔ aboa a ɔto so abiɛsa no ahoɔhare ne ahemman a odii so no ho?
13 Na aboa a ɔto so abiɛsa no te “sɛ ɔsebɔ, na ɔwɔ anomaa ntaban anan, na aboa no wɔ ti anan, na wɔmaa no tumi.” (Daniel 7:6) Te sɛ ne sɛso—Nebukadnesar dae no mu ohoni no yafunu ne n’asrɛ a ɛyɛ kɔbere no—aboa a ɔwɔ ntaban anan ne ti anan yi yɛ Makedonia, anaa Hela ahene a wɔbaa nnidiso nnidiso a nea odi kan ne Alexander Ɔkɛseɛ no ho mfonini. Alexander de ahoɔhare ne mmirika a ɛte sɛ ɔsebɔ de kɔfaa Asia Kumaa, kesee fam kɔɔ Misraim koduu India atɔe fam ahye so. (Fa toto Habakuk 1:8 ho.) Na n’ahemman no so sen “osisi” no de, efisɛ na Makedonia, Hela, ne Persia Ahemman no ka ho. —Hwɛ “Ɔhene Aberantewa Bi Di Wiase So Nkonim” a ɛwɔ kratafa 153 no.
14. Ɛyɛɛ dɛn na “ɔsebɔ” no nyaa ti anan?
14 “Ɔsebɔ” no benyaa ti anan wɔ Alexander wu akyi wɔ 323 A.Y.B. mu. Awiei koraa no, n’asahene baanan dii n’ade wɔ n’ahemman no afã horow. Seleucus dii Mesopotamia ne Siria so. Ptolemy dii Misraim ne Palestina so tumi. Lysimachus dii Asia Kumaa ne Thrace so, na Cassander faa Makedonia ne Hela. (Hwɛ “Wɔkyekyɛ Ahemman Kɛse Bi Mu” a ɛwɔ kratafa 162 no.) Afei ahude foforo bi sii.
ABOA BI A NE HO YƐ HU KYERƐ SƐ ƆYƐ SORONKO
15. (a) Ka aboa a ɔto so anan no ho asɛm. (b) Na aboa a ɔto so anan no yɛ dɛn ho sɛnkyerɛnne, na ɔkwan bɛn so na ɔpɛtɛw biribiara a na ɛwɔ ne kwan mu na odii?
15 Daniel kaa aboa a ɔto so anan no ho asɛm sɛ “ne ho yɛ hu ne nwonwa na ɔyɛ den boro so.” Ɔtoaa so sɛ: “Ɔwɔ dade se akɛse, na odidi kekaw mu de n’anan pɛtɛw nkae, na ɛsono no ne mmoa a wodii n’anim nyinaa, na ɔwɔ mmɛn du.” (Daniel 7:7) Aboa a ne ho yɛ hu yi fii ase sɛ Roma amammui ne sraadi tumi. Ɛde nkakrankakra ko faa Hela Ahemman no afã horow anan no, na ebeduu afe 30 A.Y.B. no, na Roma abɛyɛ Bible nkɔmhyɛ mu wiase tumi a edi hɔ. Bere a Roma Ahemman no nam akodi so dii biribiara a ɛwɔ ne kwan mu so nkonim no, ɛtrɛw faa asase a efi ase fi British Isles no so bɛfaa Europa fã kɛse, kɔfaa Mediterranea ho hyiae, traa Babilon kosii Persia Po Basa no ano.
16. Asɛm bɛn na ɔbɔfo no kae wɔ aboa a ɔto so anan no ho?
16 Esiane sɛ na Daniel pɛ sɛ ohu dekode a aboa a “ne ho yɛ hu” yi yɛ no nti, ɔwɛn n’aso tiee ɔbɔfo no bere a ɔde nkyerɛkyerɛmu rema no: “Na [ne] mmɛn du no, ahenni no ara mu na ahene du bɛsɔre, na wɔn akyi no ɔfoforo bi bɛsɔre, na ɛbɛsono ɔno ne kanfo no, na ɔbɛbrɛ ahene baasa ase.” (Daniel 7:19, 20, 24) Na dɛn ne “mmɛn du” anaa “ahene du” yi?
17. Aboa a ɔto so anan no “mmɛn du” no yɛ dɛn ho sɛnkyerɛnne?
17 Bere a Roma dii yiye pii na ahene no ahohwisɛm maa ne bra sɛee no, n’asraadi tumi brɛɛ ase. Ankyɛ na ɛbɛdaa adi sɛ Roma sraadi tumi rekɔ fam. Awiei koraa no, ahemman kɛse no mu kyekyɛ yɛɛ ahenni nketewa pii. Esiane sɛ Bible taa de akontaabude du kyerɛ biribi a edi mu nti, aboa a ɔto so anan no “ahene du” no gyina hɔ ma ahenni a bere a Roma gui no ɛbae nyinaa.—Fa toto Deuteronomium 4:13; Luka 15:8; 19:13, 16, 17 ho.
18. Ɔkwan bɛn so na Roma kɔɔ so dii Europa so mfehaha pii bere a na wɔatu ɔhempɔn a otwa to no mpo no?
18 Nanso, bere a wotuu ɔhempɔn a otwa to no ade so wɔ Roma wɔ 476 Y.B. mu no, Roma Wiase Tumidi no kɔɔ so traa hɔ. Roma faa pope ahorow so kɔɔ so dii Europa so tumi wɔ amammui ne ne titiriw no, nyamesom fam. Ɛyɛɛ saa denam nhyehyɛe a na ɛma Europafo dodow no ara ma ɔdehye ne afei ɔhene bi di wɔn so tumi no so. Ɔhene biara gyee pope tumi toom. Enti Roma Ahemman Kronkron a na Roma pope di mu akoten no dii wiase so wɔ saa abakɔsɛm bere tenten a wɔfrɛ no Esum Mmere no mu.
19. Sɛnea abakɔsɛm kyerɛwfo bi kyerɛ no, sɛ wɔde Roma toto ahemman a edii n’anim no ho a, na ɛte dɛn?
19 Hena na ɔrennye ntom sɛ aboa a ɔto so anan no yɛ ‘soronko wɔ ahenni afoforo nyinaa’ ho? (Daniel 7:7, 19, 23) Abakɔsɛm kyerɛwfo H. G. Wells kyerɛw eyi ho asɛm sɛ: “Na Roma tumi foforo yi . . . yɛ soronko wɔ ahemman akɛse a edii n’anim wɔ anibuei wiase no mu biara ho wɔ akwan horow pii so. . . . Ɛkame ayɛ sɛ wiase Helafo nyinaa bɛyɛɛ emufo, na na ɛnyɛ Ham ne Sem asefo nkutoo na wodi mu akoten te sɛ ahemman biara a edii n’anim no . . . Na ɛyɛ ade foforo koraa wɔ abakɔsɛm mu . . . Roma Ahemman no fi ahemman bi mu, ahenni foforo a wɔanhwɛ kwan; na Romafo no resɔ ɔman sohwɛ adwuma kɛse bi ahwɛ a ɛkame ayɛ sɛ na wonnim.” Nanso, na biribi foforo befi aboa a ɔto so anan no mu aba.
ABƐN KETEWA BI BEDI TUMI
20. Dɛn na ɔbɔfo no kae wɔ abɛn ketewa a efifii wɔ aboa a ɔto so anan no ti ho no ho?
20 Daniel kae sɛ: “Merehwɛ mmɛn no no, hwɛ, abɛn ketewa foforo bi puei ɛnonom ntam, na kan mmɛn no mu abiɛsa ase tutui ɛno anim.” (Daniel 7:8) Ɔbɔfo no kaa abɛn a epuee yi ho asɛm kyerɛɛ Daniel sɛ: “Wɔn [ahene du no] akyi no, ɔfoforo bi bɛsɔre, na ɛbɛsono ɔno ne kanfo no, na ɔbɛbrɛ ahene baasa ase.” (Daniel 7:24) Hena ne ɔhene yi, bere bɛn na ɔsɔree, na ahene baasa bɛn na ɔbrɛɛ wɔn ase?
21. Ɛyɛɛ dɛn na Britania bɛyɛɛ aboa a ɔto so anan no sɛnkyerɛnne kwan so abɛn ketewa no?
21 Susuw nsɛm a esisii a edidi so yi ho. Wɔ 55 A.Y.B. mu no, Romafo Sahene Julius Caesar ko faa Britania nanso wantumi antra hɔ afebɔɔ. Wɔ 43 Y.B. mu no, Ɔhempɔn Klaudio fii ase sɛ ɔbɛko afa Britania kesee fam koraa. Afei, wɔ 122 Y.B. mu no, Ɔhempɔn Hadrian fii ase too ɔfasu fii Tyne Asubɔnten no ho kosii Solway Abɔe, a Roma Ahemman no atifi fam hye kɔpem hɔ no. Wɔ afeha a ɛto so anum mfiase no, Roma asraafo fii supɔw no so kɔe. Abakɔsɛm kyerɛwfo bi kyerɛkyerɛɛ mu sɛ: “Wɔ afeha a ɛto so dunsia mu no, na England yɛ ahenni a na enni tumi kɛse. Sɛ wɔde toto ho a, na enni nneɛma pii te sɛ Netherlands. Na emu nnipa sua sen France koraa. Na n’asraafo (a po so asraafo ka ho) ho nyɛ den sɛ Spain asraafo.” Ɛda adi sɛ saa bere no na Britania a ɛyɛ aboa a ɔto so anan no sɛnkyerɛnne kwan so abɛn ketewa no nyɛ ahenni titiriw bi. Nanso na ɛno bɛsakra.
22. (a) Aboa a ɔto so anan no mmɛn foforo abiɛsa bɛn na abɛn “ketewa” no tutu gui? (b) Afei Britania bɛdaa adi sɛ ɛyɛ dɛn?
22 Wɔ 1588 mu no, Philip II a ofi Spain maa Spain po so akohyɛn kɔtow hyɛɛ Britania so. Saa po so akohyɛn 130 a asraafo bɛboro 24,000 na wɔwom no kɔfaa Engiresi Nsuka no mu nanso Britania po so asraafo dii wɔn so nkonim na Atlantic po so ahum a ano yɛ den no sɛee wɔn nneɛma. Abakɔsɛm kyerɛwfo bi kae sɛ eyi “maa tumi a Spain po so asraafo wɔ no bedii England nsam.” Wɔ afeha a ɛto so 17 mu no, Netherlandsfo nyaa aguadifo ahyɛn a ɛdɔɔso sen biara. Nanso, esiane sɛ na aman a Britania di so no redɔɔso nti, edii saa ahenni no so nkonim. Wɔ afeha a ɛto so 18 mu no, Britaniafo ne Fransefo koe wɔ Amerika Kusuu fam ne India, na ɛma wɔde wɔn nsa hyɛɛ Paris Apam no ase wɔ 1763 mu. Nhoma kyerɛwfo William B. Willcox kae sɛ apam yi “ma wogyee Britania gyinabea foforo toom sɛ ɛne Europa man titiriw a edi aman a enni Europa so tumi.” Nkonim koraa a Britania dii wɔ Franseni Napoleon so wɔ 1815 Y.B. mu no sii so dua sɛ na ɛwɔ tumi sen biara. Enti “ahene baasa” a Britania ‘brɛɛ wɔn ase’ no ne Spain, Netherlands, ne France. (Daniel 7:24) Esiane eyi nti, Britania bɛyɛɛ ɔman a ɛwɔ amammui ne aguade mu tumi wɔ aman foforo so sen biara wɔ wiase. Yiw, abɛn “ketewa” no nyin bɛyɛɛ wiase tumi!
23. Ɔkwan bɛn so na sɛnkyerɛnne kwan so abɛn no ‘menee asase nyinaa’?
23 Ɔbɔfo no ka kyerɛɛ Daniel sɛ aboa a ɔto so anan anaa ahenni a ɛto so anan no ‘bɛmene asase nyinaa.’ (Daniel 7:23) Ɛbaam saa wɔ kan Roma mantam a wɔfrɛ no Britania no fam. Awiei koraa no, ɛbɛdanee Britania Ahemman na ‘ɛmenee asase nyinaa.’ Wɔ bere bi mu no, na ahemman yi kɛse yɛ asase nkyem anan mu biako, na emu nnipa yɛ asase so nnipa nkyem anan mu biako.
24. Dɛn na abakɔsɛm kyerɛwfo bi kae wɔ sɛnea Britania Ahemman no yɛ soronko no ho?
24 Sɛnea na Roma Ahemman no yɛ soronko wɔ wiase tumi ahorow a edii n’anim ho no, saa ara na na ɔhene a abɛn “ketewa” no yɛ ne ho mfonini no nso ‘bɛyɛ soronko wɔ kanfo no ho.’ (Daniel 7:24) Abakɔsɛm kyerɛwfo H. G. Wells kaa Britania Ahemman no ho asɛm sɛ: “Na biribi a ɛte saa mmae da. Nea edi kan na ehia titiriw wɔ nhyehyɛe mũ no nyinaa mu ne ‘ɔhene anaa ɔhemmaa a odi ahenni a ɛka bom yɛ Britania Ahemman Nkabom no so.’ . . . Asoɛe ne onipa biara nni hɔ a wate sɛnea wɔhyehyɛɛ Britania Ahemman no ase awie. Na ɛyɛ ahenni a efi afoforo mu ne nea wɔko fae a wɔaka abom a ɛyɛ soronko koraa wɔ biribiara a wɔafrɛ no ahemman pɛn no ho.”
25. (a) Awiei koraa no, dɛn na ɛbɛyɛɛ sɛnkyerɛnne kwan so abɛn ketewa no? (b) Ɔkwan bɛn so na abɛn “ketewa” no wɔ “aniwa a ɛte sɛ onipa aniwa” ne “ano a ɛkeka nsɛnkɛse”?
25 Na ɛnyɛ Britania Ahemman no nkutoo ne abɛn “ketewa” no. Wɔ 1783 mu no, Britania maa Amerika aman a na edi so no mu 13 ahofadi. Awiei koraa no, United States, Amerika, bɛyɛɛ Britania adamfo, a akyi no, ɛbɛyɛɛ Wiase Ko II asase so ɔman titiriw. Ɛne Britania da so ara wɔ abusuabɔ a emu yɛ den. Anglo-Amerika wiase tumi abien a aka abom no ne ‘abɛn ketewa a ɛwɔ aniwa’ no. Nokwarem no, saa wiase tumi yi hwɛ ade kɔ akyiri na ɛyɛ onitefo! “Ɛkeka nsɛnkɛse,” kyerɛ nea ɛsɛ sɛ wiase aman dodow no ara yɛ, ɛyɛ wiase kasamafo anaa “atoro diyifo.”—Daniel 7:8, 11, 20; Adiyisɛm 16:13; 19:20.
ABƐN KETEWA NO SƆRE TIA ONYANKOPƆN NE N’AHOTEFO
26. Nkɔm bɛn na ɔbɔfo no hyɛe wɔ nea sɛnkyerɛnne kwan so aboa no kae ne nea ɔyɛe wɔ Yehowa ne n’asomfo ho no ho?
26 Daniel toaa so kaa n’anisoadehu no ho asɛm sɛ: “Mehwɛe na saa abɛn no ne ahotefo dii ako, na etumii wɔn.” (Daniel 7:21) Onyankopɔn bɔfo hyɛɛ “abɛn” anaa ɔhene yi ho nkɔm sɛ: “Na ɔbɛkeka nsɛm atia nea ɔwɔ ɔsorosoro no, na ɔbɛhaw ɔsorosoroni no akronkronfo, na ɔbɛbɔ ne tirim sɛ ɔbɛdan mmere ne mmara, na wɔde wɔn bɛhyɛ ne nsa, ɛbere bi ne mmere ne bere fã.” (Daniel 7:25) Ɔkwan bɛn so ne bere bɛn na nkɔmhyɛ yi fã no nyaa mmamu?
27. (a) Henanom ne “ahotefo” a abɛn “ketewa” no taa wɔn no? (b) Na ɔkwan bɛn so na sɛnkyerɛnne kwan so abɛn no pɛe sɛ “ɔbɛdan mmere ne mmara”?
27 “Ahotefo” a abɛn “ketewa”—Anglo-Amerika Wiase Tumi—no taa wɔn no ne Yesu akyidifo a wɔasra wɔn a wɔwɔ asase so no. (Romafo 1:7; 1 Petro 2:9) Mfe bi ansa na Wiase Ko I reba no, wɔn a wɔasra wɔn yi nkaefo de kɔkɔbɔ mae wɔ baguam sɛ 1914 bɛyɛ “amanaman no bere” awiei. (Luka 21:24) Bere a ɔko fii ase saa afe no, na ɛda adi sɛ abɛn “ketewa” no abu n’ani agu kɔkɔbɔ yi so, efisɛ ɛkɔɔ so haw “ahotefo” a wɔasra wɔn no. Anglo-Amerika Wiase Tumi no ko tiaa mmɔden a wɔbɔe sɛ wobedi Yehowa ahwehwɛde (anaa “mmara”) a ese n’adansefo nka Ahenni ho asɛmpa no wɔ wiase nyinaa so no. (Mateo 24:14) Enti, abɛn “ketewa” no bɔɔ mmɔden sɛ ‘ɔbɛdan mmere ne mmara.’
28. “Ɛbere bi ne mmere ne bere fã” no tenten yɛ ahe?
28 Yehowa bɔfo kaa nkɔmhyɛ bere bi a ɛyɛ “ɛbere bi ne mmere ne bere fã” ho asɛm. Ne tenten yɛ ahe? Bible nkyerɛkyerɛmufo gye tom sɛ asɛm yi kyerɛ mmere abiɛsa ne fã—bere biako, mmere abien, ne bere fã a wɔaka abom. Esiane sɛ “mmere nson” a Nebukadnesar bɔɔ dam no yɛ mfe ason nti, mmere abiɛsa ne fã yɛ mfe abiɛsa ne fã. * (Daniel 4:16, 25) An American Translation kenkan sɛ: “Wɔde wɔn bɛhyɛ ne nsa afe biako, mfe abien ne afe fã.” James Moffatt nkyerɛase no ka sɛ: “Mfe abiɛsa ne fã.” Wɔka bere koro no ara ho asɛm wɔ Adiyisɛm 11:2-7, faako a wɔka sɛ Onyankopɔn adansefo befura atweaatam de aka asɛm asram 42 anaa nnafua 1,260, na afei wɔakum wɔn no. Bere bɛn na bere yi fii ase na ɛbaa awiei?
29. Bere bɛn na ɔkwan bɛn so na nkɔmhyɛ mu mfe abiɛsa ne fã no fii ase?
29 Na Wiase Ko I yɛ sɔhwɛ bere ma Kristofo a wɔasra wɔn no. Ebeduu 1914 awiei no, na wɔrehwɛ ɔtaa kwan. Nokwarem no, afe asɛm a wɔpaw maa 1915 yɛ asɛm a Yesu bisaa n’asuafo no sɛ, “Mubetumi anom kuruwa a merebɛnom no anaa?” Na egyina Mateo 20:22 so. Enti, efi December 1914 no, saa adansefo kuw ketewa no ‘furaa atweaatam’ de kaa asɛm.
30. Ɔkwan bɛn so na Anglo-Amerika Wiase Tumi no haw Kristofo a wɔasra wɔn no wɔ Wiase Ko I mu?
30 Bere a ɔko no gyee nkurɔfo adwene no, Kristofo a wɔasra wɔn no hyiaa ɔsɔretia pii. Wɔde ebinom too afiase. Atumfo atirimɔdenfo yɛɛ ebinom te sɛ Frank Platt a na ɔwɔ England ne Robert Clegg a ɔwɔ Canada no ayayade. Wɔ February 12, 1918 mu no, Canada Britania Ahenni baraa Studies in the Scriptures nhoma no po a ɛto so ason a wɔato din sɛ The Finished Mystery a na wotintimii nkyɛe ne nkratawa a ɛne The Bible Students Monthly no. Ɔsram a edi hɔ no, U.S. Atemmu Asoɛe kae sɛ mmara mma kwan sɛ wɔbɛkyekyɛ po a ɛto so ason no. Dɛn na efii mu bae? Wɔhwehwɛɛ Yehowa asomfo afie mu, gyee wɔn nhoma ahorow fii wɔn nsam, na wɔkyeree ebinom!
31. Bere bɛn na ɔkwan bɛn so na “ɛbere bi, ne mmere ne bere fã” no baa awiei?
31 Ɔhaw a wɔde baa Onyankopɔn nkurɔfo a wɔasra wɔn no so no duu ne mpɔmpɔn so wɔ June 21, 1918 mu, bere a wogyinaa ntwatoso so buu otitrani J. F. Rutherford ne Ɔwɛn Aban Asafo no mpanyimfo fɔ sɛ wɔmfa wɔn nto afiase bere tenten no. Esiane sɛ na abɛn “ketewa” no pɛ sɛ “ɔbɛdan mmere ne mmara” nti, na agu asɛnka adwuma a na wɔahyehyɛ no. (Adiyisɛm 11:7) Enti “ɛbere bi, mmere, ne bere fã” a wɔhyɛɛ ho nkɔm no baa awiei wɔ June 1918 mu.
32. Dɛn nti na wobɛka sɛ abɛn “ketewa” no antɔre “ahotefo” no ase?
32 Nanso ɔhaw a abɛn “ketewa” no de baa “ahotefo” no so no antɔre wɔn ase. Sɛnea wɔhyɛɛ nkɔm wɔ Adiyisɛm nhoma no mu no, Kristofo a wɔasra wɔn no san de nnamyɛ fii wɔn adwuma no ase bere a wogyaee wɔ bere tiaa bi akyi no. (Adiyisɛm 11:11-13) Wɔ March 26, 1919 mu no, woyii Ɔwɛn Aban Asafo no titrani no ne n’ayɔnkofo no fii afiase, na wobuu wɔn bem akyiri yi wɔ sobo a wɔbɔɔ wɔn no ho. Ɛno akyi pɛɛ no, nkaefo a wɔasra wɔn no san siesiee wɔn ho sɛ wɔbɛkɔ so ayɛ wɔn adwuma no. Nanso, dɛn na na ɛbɛto abɛn “ketewa” no?
NEA NE NNA AKYƐ NO DI ASƐM
33. (a) Hena ne Nea Ne Nna Akyɛ no? (b) Na dɛn ne ‘nhoma a wobuebuee’ mu wɔ ɔsoro Asɛnnibea no?
33 Bere a Daniel ada mmoa anan no adi awie no, oyi n’ani fi aboa a ɔto so anan no so de hwɛ biribi a ɛkɔ so wɔ soro. Ohu Nea Ne Nna Akyɛ No sɛ ɔte n’anuonyam ahengua so sɛ Ɔtemmufo. Na Nea Ne Nna Akyɛ No nyɛ obiara sɛ Yehowa Nyankopɔn. (Dwom 90:2) Bere a ɔsoro Asɛnnibea no fi ase di asɛm no, Daniel hu sɛ ‘wɔrebuebue nhoma mu.’ (Daniel 7:9, 10) Esiane sɛ Yehowa te ase fi tete a onni mfiase nti, onim adesamma abakɔsɛm nyinaa te sɛ nea wɔakyerɛw wɔ nhoma mu. Wahu sɛnkyerɛnne kwan so mmoa anan no nyinaa na obetumi agyina nea onim wɔ wɔn ho no so abu wɔn ntɛn.
34, 35. Dɛn na ɛbɛto abɛn “ketewa” no ne tumi afoforo a ɛte sɛ mmoa no?
34 Daniel toa so sɛ: “Mede hwɛ ara, ɛno na nsɛm akɛse a abɛn no kekae nti, mehwɛe ara kosii sɛ wokum aboa no, na wɔsɛee ne honam, na wɔde maa ogya a ɛrefram no. Na mmoa a aka no nso, wogyee wɔn tumi, nanso wɔhyɛɛ wɔn bere ne dɔn a wɔn nkwa nna nkodu.” (Daniel 7:11, 12) Ɔbɔfo no ka kyerɛɛ Daniel sɛ: “Na wɔbɛtra ase abu atɛn, na wɔagye ne nsam tumi asɛe no ama ayera akosi ase.”—Daniel 7:26.
35 Ɛdenam Ɔtemmufo Kɛse, Yehowa Nyankopɔn, mmara so no, nea ɛtoo Roma Ahemman a ɛtaa tete Kristofo no bi bɛto abɛn a ɛkaa Onyankopɔn ho abususɛm na ɛhaw “ahotefo” no. N’ahenni begu. “Ahene” a wonni tumi kɛse a wɔte sɛ mmɛn a efii Roma Ahemman no mu bae no nso befi hɔ. Na ahenni a efi kan tumi horow a ɛte sɛ mmoa mu bae no nso ɛ? Sɛnea wɔhyɛɛ nkɔm no, wɔde ‘bere ne mmere’ kaa wɔn nkwa nna ho. Nnipa akɔ so atra wɔn nsase so abedu yɛn bere yi so. Sɛ nhwɛso no, Iraq wɔ tete Babilon asase so. Persia (Iran) ne Greece da so wɔ hɔ. Saa wiase tumi ahorow a aka yi ka Amanaman Nkabom no ho. Wɔbɛsɛe ahenni horow yi nso bere a wɔsɛe wiase tumi a etwa to no. Wɔbɛsɛe nnipa nniso nyinaa pasaa wɔ “Onyankopɔn, ade nyinaa so tumfoɔ no, da kɛse no mu ko no” mu. (Adiyisɛm 16:14, 16) Ɛnde, na hena na obedi wiase so?
AHENNI A ƐBƐTRA HƆ DAA ABƐN YIYE!
36, 37. (a) Hena ne “obi a ɔte sɛ onipa ba” no, na bere bɛn na ɔkɔɔ ɔsoro Asɛnnibea hɔ, na dɛn nti na ɔkɔɔ hɔ? (b) Dɛn na wɔde sii hɔ wɔ 1914 Y.B. mu?
36 Daniel teɛɛm sɛ: “Mede hwɛ, anadwo adehu no mu ara, na hwɛ, obi a ɔte sɛ onipa ba nam ɔsoro amununkum mu reba, na oduu nea ne nna akyɛ no nkyɛn, na wɔma ɔbɛn n’anim.” (Daniel 7:13) Bere a Yesu Kristo wɔ asase so no, ɔfrɛɛ ne ho sɛ “onipa ba” de kyerɛe sɛ ɔne adesamma bɔ abusua. (Mateo 16:13; 25:31) Yesu ka kyerɛɛ Sanhedrin, anaa Yudafo asɛnnibea a ɛkorɔn no sɛ: “Mubehu onipa ba no sɛ ɔte tumi no nifa, na ɔreba ɔsoro mununkum so.” (Mateo 26:64) Enti wɔ Daniel anisoadehu no mu no, nea ɔreba a onipa aniwa nhu no a ɔkɔɔ Yehowa Nyankopɔn nkyɛn no ne Yesu Kristo a wɔanyan no a wɔahyɛ no anuonyam no. Bere bɛn na eyi sii?
37 Onyankopɔn ne Yesu Kristo ayɛ Ahenni apam, sɛnea ɔne Ɔhene Dawid yɛe no. (2 Samuel 7:11-16; Luka 22:28-30) Bere a “amanaman no bere” baa awiei wɔ 1914 Y.B. mu no, Yesu Kristo tumi nyaa Ahenni nniso sɛ Dawid ɔdedifo. Daniel nkɔmhyɛ kyerɛwtohɔ no kenkan sɛ: “Na ɔno na wɔde tumi ne anuonyam ne ahenni maa no ma aman, nkurɔfo ne ɔkasa horow nyinaa som no; ne tumi yɛ daa tumi a ɛrentwam da, na n’ahenni yɛ nea ɛrensɛe da.” (Daniel 7:14) Enti wɔde Mesia Ahenni no sii hɔ wɔ soro wɔ 1914 mu. Nanso, wɔde ahenni no ma afoforo nso.
38, 39. Henanom na wɔde nniso a ebedi wiase so daa bɛma wɔn?
38 Ɔbɔfo no kae sɛ: “Na ɔsorosoroni no ahotefo bɛfa ahenni no.” (Daniel 7:18, 22, 27) Yesu Kristo ne ahotefo no panyin. (Asomafo no Nnwuma 3:14; 4:27, 30) “Ahotefo” afoforo a wobenya ahenni no mu kyɛfa no ne Kristofo anokwafo 144,000 a wɔde honhom asra wɔn a wɔne Kristo yɛ Ahenni adedifo no. (Romafo 1:7; 8:17; 2 Tesalonikafo 1:5; 1 Petro 2:9) Wonyan wɔn fi owu mu sɛ ahonhom a wɔwɔ nkwa a owu nnim a wɔne Kristo bedi hene wɔ ɔsoro Bepɔw Sion so. (Adiyisɛm 2:10; 14:1; 20:6) Enti, Kristo Yesu ne Kristofo a wɔasra wɔn a wobenyan wɔn no bedi adesamma wiase no so hene.
39 Onyankopɔn bɔfo kaa onipa Ba no ne “ahotefo” afoforo a wobenyan wɔn no nniso ho asɛm sɛ: “Na wɔde ɔsoro nyinaa ase ahemman so tumi ne kɛseyɛ bɛma ɔsorosoroni no akronkronfo man; n’ahenni yɛ daa ahenni, na tumi nyinaa bɛsom no atie no.” (Daniel 7:27) Nhyira horow a adesamma asoɔmmerɛfo benya wɔ saa Ahenni no mu bɛn ara ni!
40. Ɔkwan bɛn so na yebetumi anya Daniel dae ne n’anisoadehu ahorow ho asɛm a yebetie no so mfaso?
40 Na Daniel nnim anisoadehu ahorow a Onyankopɔn de maa no no mmamu a ɛyɛ nwonwa no nyinaa. Ɔkae sɛ: “Ɛha na nsɛm no ase asi. Na me, Daniel de, m’adwene haw me pii, na m’anim sakrae, na mede asɛm no misiee me koma mu.” (Daniel 7:28) Nanso, yɛn de yɛte bere a yebetumi ate nea Daniel hui no mmamu ase mu. Nkɔmhyɛ yi a yebetie no bɛhyɛ gyidi ne ahotoso a yɛwɔ sɛ Yehowa Mesia Hene no bedi wiase so no mu den.
^ nky. 4 Nea ɛbɛyɛ na nsɛm mu ada hɔ na yɛanti mu mpɛn pii no, yebesusuw Daniel 7:15-28 nkyekyem biara ho de afoa anisoadehu ahorow nkyerɛkyerɛmu a wɔde ama wɔ Daniel 7:1-14 no so.
^ nky. 7 Hwɛ nhoma yi Ti 4.
^ nky. 28 Hwɛ nhoma yi Ti 6.
• ‘Mmoa akɛse anan a wopue fii po mu’ no mu biara yɛ dɛn ho mfonini?
• Dɛn ne abɛn “ketewa” no?
• Ɔkwan bɛn so na sɛnkyerɛnne kwan so abɛn ketewa no haw “ahotefo” no wɔ Wiase Ko I mu?
• Dɛn na ɛbɛto sɛnkyerɛnne kwan so abɛn ketewa no ne tumi ahorow a ɛte sɛ mmoa no?
• Ɔkwan bɛn so na wunyaa Daniel dae ne anisoadehu ahorow a ɛfa “mmoa akɛse anan” no ho so mfaso?
[Adaka/Mfonini wɔ kratafa 149-152]
ƆHEMPƆN A ƆWƆ BOASETƆ
HELANI nhoma kyerɛwfo bi a ɔtraa ase wɔ afeha a ɛto so anum A.Y.B. mu kaee no sɛ ɔhempɔn pa a ɔwɔ boasetɔ. Wɔfrɛ no wɔ Bible mu sɛ “nea wasra no” ne “ɔkoropɔn” a ‘ofi apuei’ reba. (Yesaia 45:1; 46:11) Ɔhempɔn a wɔka ne ho asɛm no ne Kores Ɔkɛseɛ a ofi Persia.
Kores fii ase gyee din wɔ bɛyɛ 560/559 A.Y.B. mu, bere a odii ne papa Cambyses I ade na ɔtraa Anshan a ɛyɛ tete Persia kurow anaa mantam bi ahengua so no. Na Anshan hyɛ Media Hene Astyages ase saa bere no. Bere a Kores tew atua tiaa Mediafo ahenni no, odii so nkonim ntɛm ara efisɛ Astyages asraafo baa n’afã. Afei Mediafo begyinaa Kores akyi. Ɛno akyi no, odii Mediafo ne Persiafo anim ma wɔde biakoyɛ dii ako. Eyi na ɛma wonyaa Medo-Persia nniso a bere bi akyi no, n’ahemman trɛw fii Aegean Po ho kosii Indus Asubɔnten ho no.​—Hwɛ asase mfonini no.
Nea edi kan no, Kores de Mediafo ne Persiafo asraafo a wɔaka abom no kɔko faa beae a na wɔyɛ basabasa​—Media atɔe fam a na Lydia Hene Croesus retrɛw n’ahemman mu akɔ Media asase so no. Bere a Kores koduu Lydia Ahemman no apuei fam hye so wɔ Asia Kumaa no, odii Croesus so nkonim gyee n’ahenkurow Sardi fii ne nsam. Afei Kores dii Ionia nkurow so nkonim de Asia Kumaa nyinaa kaa Medo-Persia Ahemman no ho. Ɔnam saayɛ so bɛyɛɛ Babilon ne ne hene Nabonido tamfo titiriw.
Afei Kores siesiee ne ho sɛ ɔne ɔhoɔdenfo Babilon bɛko. Efi saa bere no, ɔmaa Bible nkɔmhyɛ nyaa mmamu. Na Yehowa nam odiyifo Yesaia so adi kan abɔ Kores din bɛyɛ mfe ahanu a na atwam no sɛ ɔne sodifo a obetu Babilon agu na wagye Yudafo afi nnommumfa mu. Esiane sɛ wodii kan paw Kores saa nti, Kyerɛwnsɛm no ka ne ho asɛm sɛ ‘nea Yehowa asra no’ no.​—Yesaia 44:​26-28.
Bere a Kores kɔtow hyɛɛ Babilon so wɔ 539 A.Y.B. mu no, ohyiaa tebea a ɛyɛ den. Esiane sɛ na afasu akɛse ne nsuka a ɛtrɛw na emu dɔ a asubɔnten Eufrate atwitwa atwa kurow no ho ahyia nti, na ɛte sɛ nea wontumi nko mfa. Na ɔfasu a ɛte sɛ bepɔw a kɔbere apon akɛse deda ano wɔ asubɔnten Eufrate kɔn so wɔ baabi a nsu no fa Babilon no. Na Kores bɛyɛ dɛn atumi ako afa Babilon?
Na Yehowa aka asie bɛboro mfe ɔha sɛ ‘ne nsu bɛyow,’ na ‘ɛsɛ sɛ ɛyow.’ (Yeremia 50:38) Sɛnea nkɔmhyɛ no kyerɛe no, Kores dan Asubɔnten Eufrate ani kyerɛɛ baabi kilomita kakra wɔ Babilon kusuu fam. Afei n’asraafo no nantew faa asubɔnka no mu, foroo ɔfasu no anim koko no hyɛn ­kurow no mu a wɔammrɛ efisɛ na kɔbere apon no ano deda hɔ. Te sɛ nea “ɔkoropɔn” de ahoɔhare kyere aboa foforo no, sodifo a ‘ofi apuei’ yi​—ko faa Babilon anadwo biako pɛ!
Wɔ Babilon Yudafo fam no, Kores nkonimdi no kyerɛe sɛ ogye a na wobenya afi nnommumfa mu a na wɔahwɛ kwan akyɛ no ne wɔn man mfe 70 amamfoyɛ no awiei adu. Hwɛ sɛnea ɛbɛyɛ sɛ wɔn ani gyei bere a Kores yɛɛ mpaemuka bi a ɛmaa wɔn kwan sɛ wɔnsan nkɔ Yerusalem nsan nkosi asɔrefie no! Kores de asɔrefie hɔ nnwinne a ɛsom bo a Nebukadnesar de kɔɔ Babilon no maa wɔn, maa wɔn kwan sɛ wɔnkra ntaabo mfi Lebanon na wɔmfa ahemfie sika ntua ɔdan no si ho ka.​—Esra 1:​1-​11; 6:​3-5.
Na Kores taa yi mmɔborohunu ne boasetɔ adi kyerɛ nnipa a odi wɔn so nkonim no. Ɛbɛyɛ sɛ ade biako nti a oyii su yi adi ne ne nyamesom. Ɛbɛyɛ sɛ na Kores di Persiani diyifo Zoroaster nkyerɛkyerɛ akyi na ɔsom Ahura Mazda​—onyame bi a wɔkyerɛ sɛ ɔne nneɛma pa nyinaa bɔfo no. Farhang Mehr kyerɛw wɔ ne nhoma The Zoroastrian Tradition no mu sɛ: “Zoroaster kyerɛe sɛ Onyankopɔn yɛ pɛ wɔ abrabɔ mu. Ɔka kyerɛɛ nkurɔfo sɛ Ahura Mazda mfa bɔne ntua bɔne so ka na mmom odi asɛntrenee, enti ɛnsɛ sɛ wosuro no na mmom ɛsɛ sɛ wɔdɔ no.” Ɛbɛyɛ sɛ gye a Kores gyee onyame a obu bra pa na odi asɛntrenee no dii no kaa adwene a na okura wɔ abrabɔ ho na ɛhyɛɛ no nkuran ma ɔdaa tema adi na wanyɛ nyiyim.
Nanso, na ɔhene no mpɛ Babilon wim tebea koraa. Na ontumi nnyina ahohuru bere mu ɔhyew a ano yɛ den no ano. Enti ɛwom sɛ Babilon kɔɔ so yɛɛ ahemman no ahenkurow, ne nyamesom ne amammerɛ kurow titiriw de, nanso na ɛyɛ n’awɔw bere mu ahenkurow kɛkɛ. Nokwarem no, bere a Kores dii Babilon so nkonim no, ankyɛ na ɔsan kɔɔ n’ahohuru bere mu ahenkurow Ahmeta a ɛwɔ soro kyɛn po bɛyɛ mita 1,900 wɔ Bepɔw Alwand ase no mu. Na hɔnom awɔw bere ne ahohuru bere ma wim yɛ nea ɛfata ma no. Kores sii ahemfie fɛfɛ bi nso wɔ n’ahenkurow a edi kan, ­Pasargadae, (ɛbɛn Persepolis) a na ɛwɔ kilomita 650 wɔ ­Ahmeta kesee fam apuei no mu. Na ɔkɔhome wɔ fie a na ɛwɔ hɔ no mu.
Enti wɔkae Kores sɛ nkonimdifo ɔkokodurufo ne ɔhempɔn a ɔwɔ boasetɔ. Ne mfe 30 ahenni no baa awiei bere a owui wɔ ɔko mu wɔ 530 A.Y.B. mu no. Ne ba Cambyses II bedii n’ade traa Persia ahengua so.
• Ɔkwan bɛn so na Persiani Kores kyerɛe sɛ ɔyɛ ‘nea Yehowa asra no’?
• Adwuma a ɛsom bo bɛn na Kores yɛ maa Yehowa nkurɔfo?
• Ɔkwan bɛn so na Kores ne nnipa a odii wɔn so nkonim no dii?
Kores ɔboda a ɛwɔ Pasargadae
Adwini a ɛwɔ Pasargadae, a Kores mfonini wɔ so
[Adaka/Mfonini wɔ kratafa 153-161]
ƆHENE ABERANTEWA BI DI WIASE SO NKONIM
BƐYƐ mfe 2,300 a atwam ni, na ɔsahene bi a ne ti nhwi yɛ akokɔsrade a wadi mfe 20 ne kakra gyina Mediterranea Po no ano. Na ɔhwɛ supɔw bi so kurow a ɛwɔ bɛyɛ kilomita biako no hãã. Esiane sɛ wɔamma no kwan ma wanhyɛn kurow no mu nti, na ɔsahene a ne bo afuw no asi ne bo sɛ ɔbɛko afa kurow no. Nhyehyɛe bɛn na ɔbɛyɛ na watumi atow ahyɛ kurow no so? Ɔbɛpae kwan afa nsu no so akɔ supɔw no so na wama n’asraafo atow ahyɛ so. Na wɔafi ase repae kwan no dedaw.
Nanso nkrasɛm bi a wɔde fi Persia Ahemman henkɛse no nkyɛn brɛɛ ɔsahene aberantewa no ma ogyaee adwuma no yɛ kakra. Esiane sɛ na Persia hene no pɛ sɛ asomdwoe ba wɔn ntam nti, ɔkae sɛ ɔbɛma no nneɛma bebree: sika kɔkɔɔ talente 10,000 (bɛboro dɔla ɔpepepem abien nnɛ), ɔde ɔhene no mmabea mu biako bɛma no aware, ɔbɛma wadi Persia Ahemman no atɔe fam nsase nyinaa so. Na ɔde eyi nyinaa rema na ama ɔsahene no agyae ɔhene no abusua a wafa wɔn nnommum no.
Ɔsahene a na ɛsɛ sɛ osi gyinae sɛ obegye nneɛma no anaa onnye no ne Alexander III a ofi Makedonia no. So ɛsɛ sɛ ogye nneɛma no? Abakɔsɛm kyerɛwfo Ulrich Wilcken ka sɛ: “Na ɛyɛ bere titiriw bi ma tete wiase no. Nokwarem no, nea efii ne gyinaesi mu bae no atra hɔ afi Mfinimfini Mmere no mu abesi yɛn bere yi so, Apuei ne Atɔe fam nyinaa.” Ansa na yɛbɛka mmuae a Alexander de mae no, ma yɛnhwɛ nsɛm a ɛkɔfaa bere titiriw yi bae no.
Wɔwoo Alexander wɔ Pella, Makedonia, wɔ 356 A.Y.B. mu. Na ne papa ne Ɔhene Philip II, na ne maame ne ­Olympias. Alexander maame kyerɛɛ no sɛ Makedonia ahene yɛ Helafo nyame Seus ba Hercules asefo. Sɛnea Olympias kyerɛ no, Alexander yɛ Achilles, Homer anwensɛm Iliad mu dɔmmarima no aseni. Esiane sɛ Alexander awofo faa saa kwan no so siesiee n’adwene maa ɔko mu nkonimdi ne anuonyam a obenya sɛ ɔhene nti, na n’ani nnye nneɛma afoforo ho pii. Bere a wobisaa Alexander sɛ obesi mmirika kane wɔ Olympic Agumadi no mu no, ɔkyerɛe sɛ sɛ ɔne ahene na ebetu mmirika no a, ɛnde obetu. Na ne botae ne sɛ ɔbɛyɛ nneɛma akɛse asen ne papa na wafa nea obetumi ayɛ no so anya anuonyam.
Bere a Alexander dii mfe 13 no, Helani nyansapɛfo Aristotle kyerɛɛ no ade boaa no ma onyaa nyansapɛ, aduyɛ, ne nyansahu ho anigye. Nkurɔfo adwene nhyia wɔ faako a Aristotle nyansapɛ nkyerɛkyerɛ nyaa Alexander nsusuwii so tumi kodui no ho. Bertrand Russell, afeha a ɛto so 20 yi mu nyansapɛfo kae sɛ: “Yebetumi aka sɛ na wɔn baanu no adwene nhyia wɔ nneɛma pii ho. Na Aristotle kura Helafo adwene sɛ kurow biara di ne ho so a na ɛretwam no bi. Na ɔhene ba onuonyampɛfo a na ɔpɛ sɛ ɔkyekye ahemman kɛse biako no ani nnye adwene a ɛne sɛ kurow biara de ne ho no ho.” Na ɛbɛyɛ sɛ Alexander adwenem yɛɛ no naa wɔ Aristotle nnyinasosɛm a ɛne sɛ wɔnyɛ wɔn a wɔnyɛ Helafo nkoa no ho, efisɛ na ɔhwehwɛ ahemman a biakoyɛ bɛba ɔne aman a obedi wɔn so nkonim no ntam.
Nanso, akyinnye biara nni ho sɛ Aristotle maa Alexander ani gyee akenkan ne adesua ho. Alexander kɔɔ so yɛɛ obi a na ɔpɛ akenkan yiye ne nkwa nna nyinaa mu, na na n’ani gye Homer nhoma ahorow ho yiye. Wɔkyerɛ sɛ osuaa Iliad​—anwensɛm mu nsɛm nkorɛnkorɛ 15,693 no nyinaa​—guu ne tirim.
Nkyerɛkyerɛ a Aristotle de maa ɔhene ba a na wadi mfe 16 yi baa awiei mpofirim wɔ 340 A.Y.B. mu bere a ɔsan kɔɔ Pella kodii Makedonia so bere a na ne papa afi hɔ no. Ɔhene ba no daa ne ho adi ntɛm ara sɛ onim ko yiye. Odii Thrace Maedi abusua atuatewfo no so nkonim ntɛm ara, faa wɔn ahenkurow ntɛm so de ne din too so ma wɔfrɛɛ no Alexandroúpolis maa Philip ani gyei.
ƆKƆ SO DI NKONIM
Kum a wokum Philip wɔ 336 A.Y.B. mu no maa Alexander a wadi mfe 20 no bedii Makedonia ahengua no. Bere a Alexander hyɛn Asia wɔ Hellespont (seesei wɔfrɛ no Dardanelles) wɔ 334 A.Y.B. mu fefɛw bere mu no, ɔde asraafo kakraa bi a wonim ko a wɔyɛ 30,000 a wɔnam fam ne 5,000 a wɔtete apɔnkɔ so dii nkonim. Na mfiridwuma ho animdefo, nnipa a wosusuw nsase, adansi ho animdefo, nyansahufo ne abakɔsɛm akyerɛwfo ka n’asraafo no ho.
Alexander dii ɔne Persiafo ntam ɔko a edi kan mu nkonim wɔ Granicus Asubɔnten ho wɔ Asia Kumaa kusuu fam atɔe (seesei wɔfrɛ no Turkey). Odii Asia Kumaa atɔe fam so nkonim wɔ saa awɔw bere no mu. Ɔne Persiafo koe nea ɛto so abien wɔ Issus, wɔ Asia Kumaa kesee fam apuei wɔ twabere a na edi hɔ no mu. Persia Henkɛse Dario III de asraafo bɛyɛ ɔpehanum na ebehyiaa Alexander wɔ hɔ. Dario a na ogye ne ho di dodo no de ne maame, ne yere, ne abusuafo afoforo baa hɔ na wɔatumi ahu nkonim kɛse a anka obedi no. Nanso na Persiafo no nhwɛ kwan sɛ Makedoniafo no de ahoɔden kɛse bɛtow ahyɛ wɔn so mpofirim. Alexander dɔm no dii Persia asraafo no so nkonim koraa, na Dario guan gyaw n’abusua maa Alexander.
Sɛ anka Alexander bɛtaa Persiafo a wɔreguan no, ɔde n’ani kyerɛɛ kusuu fam kɔfaa Mediterranea Mpoano, ko faa baabi a Persia asraafo a wɔyɛ den no trae no. Nanso kurow Tiro a ɛwɔ supɔw so no ko tiaa ne ntua no. Esiane sɛ Alexander sii ne bo sɛ ɔbɛko afa kurow no nti, ofii ntua a edii asram ason ase. Wɔ ntua no mu na Dario bɛkae sɛ wonsiesie wɔn ntam a yɛaka ho asɛm dedaw no. Wɔkyerɛ sɛ na nneɛma no dɔɔso araa ma Alexander fotufo Parmenio a na ogye no di yiye no kae sɛ: ‘Sɛ mene Alexander a, anka megye.’ Nanso ɔsahene aberantewa no buae sɛ: ‘Sɛ me nso mene Parmenio a, anka megye.’ Alexander ampene so na ɔtoaa ne ntua no so sɛee saa kurow a na edi akokurokosɛm wɔ po so no wɔ July 332 A.Y.B. mu.
Alexander amfa ne nsa anka Yerusalem efisɛ ɛde ne ho bɛhyɛɛ n’ase, na ɔko kɔɔ kesee fam kodii Gaza so nkonim. Esiane sɛ na Persia nniso ama Misraim abrɛ nti, egyee no toom sɛ ogyefo. Ɔbɔɔ afɔre maa Apis nantwinini no wɔ Memfis, na ɔnam saayɛ so sɔɔ Misrifo akɔmfo ani. Ɔkyekyee kurow Alexandria a akyiri yi ɛbɛyɛɛ nhomasua ahenkurow te sɛ Atene na ɛda so kura ne din no nso.
Afei, Alexander de n’ani kyerɛɛ kusuu fam apuei, kɔfaa Palestina kɔɔ Tigris Asubɔnten ho. Wɔ afe 331 A.Y.B. mu no, ɔne Persiafo koo ɔko a ɛto so abiɛsa wɔ Gaugamela a ɛbɛn Niniwe amamfo so no. Alexander asraafo 47,000 no dii Persiafo asraafo a na wɔasan atete wɔn a anyɛ yiye koraa no wɔbɛyɛ 250,000 no so nkonim! Dario guan na akyiri yi n’ankasa manfo kum no.
Esiane sɛ nkonimdi hyɛɛ Alexander mpamden nti, ɔde n’ani kyerɛɛ kesee fam na ɔko faa Persiafo awɔw bere mu ahenkurow Babilon. Odii nhenkurow a ɛne Susan ne Per­sepolis so nkonim, na ogyee Persiafo sikakorabea kɛse no hyew Xerxes ahemfie kɛse no. Awiei koraa no, ɔko faa ahenkurow Ahmeta. Saa nkonimdifo ɔhoɔharefo yi dii Persia ahemman a aka no so nkonim, na ɔkɔ koduu Indus Asubɔnten a ɛwɔ nnɛyi Pakistan no ano tɔnn.
Bere a Alexander twaa asubɔnten Indus wɔ Persia mansin Taxila hye so no, ohyiaa ɔtamfo bi a ɔyɛ den, Indiafo hempɔn Porus. Alexander ne no koo ne ko kɛse a ɛto so anan a etwa to no wɔ June 326 A.Y.B. mu. Na asraafo 35,000 ne asono 200 a wɔmaa ehu kaa Makedoniafo apɔnkɔ no ka Porus akofofo dɔm no ho. Ɔko no mu yɛɛ den na nnipa pii wuwui, nanso Alexander asraafo no dii nkonim. Porus de ne ho mae na ɔbaa Alexander afã.
Na bɛboro mfe awotwe atwam fi bere a Makedonia asraafo kɔɔ Asia, na na wɔabrɛ na wɔn ani agyina fie. Esiane sɛ ɔko a emu yɛ den a wɔne Porus koe no ama wɔabrɛ nti, wɔpɛe sɛ wɔsan kɔ wɔn man mu. Ɛwom sɛ mfiase no na Alexander mpene so de, nanso ɔyɛɛ nea na wɔhwehwɛ no maa wɔn. Na Hela abɛyɛ wiase tumi ampa. Bere a wɔkyekyee Helafo atubraman wɔ nsase a wodii so nkonim no so no, Hela kasa ne amammerɛ trɛw wɔ ahemman no mu nyinaa.
ONIPA A NA OKURA KYƐM NO
Ade a ɛkaa Makedonia asraafo boom wɔ mfe a wɔde dii nkonim no mu ne Alexander nipasu. Sɛ wɔko wie a, Alexander taa kɔsrasra wɔn a wɔapira no, ɔhwɛ wɔn apirakuru no, ɔkamfo asraafo no wɔ wɔn akokoduru ho, na ɔhwɛ nea wotumi yɛe ho kyɛ wɔn ade. Na Alexander yɛ nhyehyɛe ma wosie wɔn a wowuwu wɔ ɔko no mu no wɔ nidi mu. Wɔmma mmarima a wowuwui no awofo ne wɔn mma ntua tow na wɔnyɛ nnwuma foforo biara. Na Alexander yɛ agumadi ne akansi nhyehyɛe na wɔde agye wɔn ani wɔ akodi ahorow akyi. Bere bi ɔyɛɛ nhyehyɛe mpo sɛ mmarima a wɔaware foforo no nnkɔ ɔko, na ɛma wotumi traa wɔn yerenom nkyɛn wɔ Makedonia wɔ awɔw bere mu. Saa nneyɛe no maa n’asraafo pɛɛ n’asɛm na wonyaa obu maa no.
Helani nhoma kyerɛwfo Plutarch kyerɛw Alexander ne Bactriani Ɔhene babea Roxana aware ho asɛm sɛ: “Nokwarem no, na ɛyɛ ɔdɔ asɛm, nanso bere koro no ara na ɛte sɛ nea ɛne n’atirimpɔw hyia. Efisɛ nnipa a na wadi wɔn so nkonim no ani gyei sɛ wohui sɛ wapaw ɔyere afi wɔn mu, ɛma wɔpɛɛ n’asɛm yiye bere a wohui sɛ onipa a ɔwɔ ahosodi kɛse no ne ɔbea biako pɛ a na ɔdɔ no no anna kosii sɛ otumi gyee no waree mmara kwan so ne nidi mu.”
Alexander kyerɛɛ obu maa afoforo aware nso. Ɛwom sɛ ɔfaa Ɔhene Dario yere dommum de, nanso ɔhwɛ hui sɛ obiara renyɛ wɔn basabasa. Saa ara nso na bere a ɔtee sɛ Makedonia asraafo baanu ato ahɔho bi yerenom mmonnaa no, ɔhyɛe sɛ sɛ wohu sɛ wodi fɔ a, wonkum wɔn.
Na Alexander pɛ nyamesom yiye te sɛ ne maame ­Olympias. Na ɔbɔ afɔre ahorow ansa na wakɔ ɔko ne ɔko no akyi, na obisa adebisafo nea nsɛnkyerɛnne ahorow bi kyerɛ. Okobisaa ade wɔ Ammon wɔ Libia. Na wɔ Babilon no odii ahyɛde a Kaldeafo de maa no wɔ afɔrebɔ ho no so, titiriw Babilonfo nyame Bel (Marduk) de.
Ɛwom sɛ na Alexander nyɛ odidifo de, nanso awiei koraa no na ɔbow nsa. Sɛ ɔnom bobesa kuruwa biako biara a, ɔkasa pii na ɔde nea watumi ayɛ hoahoa ne ho. Ade biako a enye koraa a Alexander yɛe ne sɛ okum n’adamfo Clitus bere a nsa a na wabow maa ne bo fuwii no. Nanso Alexander dii ho yaw araa ma ɔdaa ne mpa mu nnansa, wannidi na wannom. Awiei koraa no, ne nnamfo tumi kasa kyerɛɛ no ma odidii.
Bere bi akyi no, Alexander anuonyampɛ ma ɔdaa su afoforo a ɛmfata adi. Ofii ase gyee nsɛm a wotwa too afoforo so no dii ntɛm ara, na ofii ase twee nkurɔfo aso denneennen. Sɛ nhwɛso no, bere a wɔma Alexander gye dii sɛ Philotas ka ho bi na anka wɔrekum no no, ɔma wokum ɔne ne papa Parmenio, a bere bi na ɔyɛ ne fotufo a ogye no di no.
Bere a Alexander san baa Babilon akyi bere tiaa bi no, ɔyaree atiridii na ne ho antɔ no da. Ɔtamfo a ɔsen biara a ɔne owu kum Alexander June 13, 323 A.Y.B. bere a na wadi mfe 32 ne asram 8 pɛ no.
Na ɛte sɛ nea Indiafo anyansafo bi kae no: “Oo Ɔhene Alex­ander, obiara wɔ asase a ne kɛse te sɛ nea yegyina so yi; wɔ w’ahoɔden a wowɔ ne w’asɛm a ɛyɛ den akyi no, wote sɛ nnipa afoforo, wufi wo man mu rekyinkyin afa asase yi nyinaa so, rehaw wo ho ne afoforo. Nanso ɛrenkyɛ wubewu, na asase a ɛbɛso w’adamoa nkutoo na wubenya.”
•Alexander Ɔkɛseɛ akyi fi he?
• Bere a Alexander bɛtraa Makedonia ahengua so ara pɛ no, ɔsatu bɛn na ofii ase?
• Ka Alexander nkonimdi no bi ho asɛm.
• Dɛn na yebetumi aka wɔ Alexander nipasu ho?
ALEXANDER NKONIMDI AHOROW
Aristotle ne ne suani Alexander
[Mfonini nkutoo na ɛwɔ ha]
Abasobɔde a wɔkyerɛ sɛ Alexander Ɔkɛseɛ no mfonini wɔ so
[Adaka/Mfonini wɔ kratafa 162, 163]
WƆKYEKYƐ AHEMMAN KƐSE BI MU
BIBLE no hyɛɛ nkɔm sɛ Alexander Ɔkɛseɛ no ahenni begu na wɔakyekyem nanso “wɔremfa mma n’asefo.” (Daniel 11:​3, 4) Enti, bere a Alexander wuu mpofirim wɔ 323 A.Y.B. mu akyi mfe 14 no, wokum ne ba Alexander IV ne ne mpena ba Heracles.
Eduu afe 301 A.Y.B. mu no, na Alexander asahene baanan di ahemman kɛse a wɔn sahene panyin no akyekye no so. Ɔsahene Cassander faa Makedonia ne Hela. Lysimachus nyaa Asia Kumaa ne Thrace. Mesopotamia ne Siria bedii Seleucus I Nicator nsam. Na Ptolemy Lagus anaa Ptolemy I dii Misraim ne Palestina so. Enti Helafo ahenni anan fii Alexander ahenni kɛse biako no mu bae.
Helafo ahenni anan no mu nea ankyɛ koraa ne Cassander tumidi. Mfe kakraa bi wɔ bere a Cassander bedii tumi akyi no, n’asefo mmarima wuwui, na wɔ 285 A.Y.B. mu no, ­Lysimachus faa Hela Ahemman no fã a ɛyɛ Europa no. Mfe anan akyi no, Lysimachus wui wɔ ɔne Seleucus I Nicator ntam akodi mu, na ɛmaa Seleucus dii Asia nsase fã kɛse no ara so tumi. Seleucus bɛyɛɛ ɔhene a odi kan wɔ ahenni a ne din da so no mu wɔ Siria. Ɔkyekyee Antiokia wɔ Siria na ɔde yɛɛ n’ahenkurow foforo. Wokum Seleucus wɔ 281 A.Y.B. mu, nanso ahene abusua a ɔhyehyɛe no kɔɔ so dii tumi besii 64 A.Y.B. mu, bere a Romafo Sahene Pompey yɛɛ Siria Romafo mantam no.
Alexander ahemman a wɔkyɛɛ mu anan no mu ahenni a ɛkyɛ sen biara ne Ptolemy de no. Ptolemy I faa abodin ɔhene no too ne ho so wɔ 305 A.Y.B. mu, na ɔno ne Makedonia hene a odi kan a odii Misraim so sɛ Farao. Bere a ɔde Alexandria yɛɛ n’ahenkurow no, ofii ase siesiee nkurow akɛse mu ntɛm ara. N’adansi adwuma a ɛsen biara no mu biako ne Alexandria Nhomakorabea a agye din no. ­Ptolemy kɔfaa Atene nhomanimfo bi a wagye din a wɔfrɛ no ­Demetrius Phalereus fii Hela bae ma ɔbɛhwɛɛ adansi adwuma kɛse yi so. Sɛnea amanneɛbɔ kyerɛ no, eduu afeha a edi kan Y.B. mu no, na nhoma mmobɔwee ɔpepem biako na ɛwɔ nhomakorabea hɔ. Ptolemy ahene abusua no kɔɔ so dii tumi wɔ Misraim kosii sɛ Roma ko fae wɔ 30 A.Y.B. mu. Afei Roma sii Hela ananmu sɛ wiase tumi titiriw.
• Ɔkwan bɛn so na wɔkyekyɛɛ Alexander ahemman kɛse no mu?
• Ahenni a Seleucus din da so no kɔɔ so dii Siria so kosii bere bɛn?
• Bere bɛn na Ptolemy ahenni a na ɛwɔ Misraim no baa awiei?
ALEXANDER AHEMMAN A EMU PAAPAEE NO
[Asɛm a Wɔahyehyɛ/Mfonini wɔ kratafa 139]
DANIEL NKƆMHYƐ NO MU WIASE TUMI AHOROW
Ohoni kɛse no (Daniel 2:31-45)
Mmoa anan a wopue fii po mu no (Daniel 7:3-8, 17, 25)
BABILON fi 607 A.Y.B.
MEDO-PERSIA fi 539 A.Y.B.
HELA fi 331 A.Y.B.
ROMA fi 30 A.Y.B.
ANGLO-AMERIKA WIASE TUMI fi 1763 Y.B.
WIASE A AMAMMUISƐM APAAPAE MU wɔ awiei bere no mu
[Mfonini nkutoo na ɛwɔ kratafa 128]
[Mfonini nkutoo na ɛwɔ kratafa 147]
Share Share Hena na Obedi Wiase So?
dp ti 9 kr. 128-163